(tonga teto avy amin'ny Amerindiana)
Ny teratanin' i Amerika (amin' ny teny anglisy Native Americans) dia olona nipetraka teo amerika teo aloha ny eoropeanina. Amin' ny fiteny anglisy, Native Americans ny anarana omena azy matetika. Araka any fomba vaovao fahatongavan' ny teratan' i Amerika tany Amerika, avy any Eorazia ny teratan' i Amerika ary tonga tany amerika tamin' i Beringia taloha (mbola tsy nisy rano teo amin' ny andilan' i Bering tamin' izany fotoana izany). 12 000 taona lasa ny fifindra-monina farany. Ny Paleô-indianina ireo dia niparitaka manerana an' i Amerika, niova ary nihabetsaka ny kolontsaina sy ny fiteny noho ny fiparitahany. Ny teny hoe Indianina dia avy amin' i Christphe Colomb, nihevitra hoe tonga tany Azia (India Atsinanana) izy nefa tany Amerika izy no nitotona, noho izany dia Indianina ny anarana nomeny ny teratany satria tamin' izany fotoana izany, mbola tsy fantatra ny fisian' ny kontinenta amerikana (izy irery ny anisan' ny voalohany niampita ny Ranomasimbe Atlantika tamin' izany fotoana izany).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teratanin%27i_Amerika&oldid=999984"
Voaova farany tamin'ny 6 Janoary 2021 amin'ny 15:24 ity pejy ity.